08 Jun, 2018 - 00:06	 2018-06-07T18:48:37+00:00 2018-06-08T00:01:36+00:00 0 Views
MAKADINI? Ndinotenda ndakavawana Daddy tatova kugara tose totenda saka vose vaifona pa0777 118 551 henyu.
Ndiri mudzimai ane makore 46 nemwana 1, ndotsvaka murume wekushamwaridzana naye ari pamushonga ane makore 50 – 60. Nhare yangu 0777 010 709.
Ndiri murume ane makore 39 nevana vaviri, ndinodawo mukadzi wekufambidzana naye ane makore 30 zvichikwira. Ndibatei pa0774 728 779.
Ndingafara mukandishambadza, ini ndiri mukomana ane makore 30. Ndinotsvagawo musikana ane makore 20 kusvika 25 anoda zvekuroorwa. Ngaave anofarira kunoongororwa ropa, ari pachokwadi uye anofara. Ngaandibate pa0717 807 737.
Ndiri murume ane makore 32 nevana 2, ndotsvagawo mukadzi ari pachokwadi nekuda kuroorwa. Handisati ndamuona wandiri kuda, ndoda ari pamushonga. Nhare yangu 0737 541 184.
Ndiri mudzimai wemakore 37, ndinotsvakawo shamwari yechirume inoremekedzawo Musiki yekufambidzana nayo. Ngaive pamushonga, ndinogara muHarare uye ndine vana vatatu. Nhare yangu 0736 840 621.
Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ari HIV negative ari mutsvuku ane makore 18 – 22. Ndinobatika pa0773 190 577.
Ndiri murume anotsvagawo mudzimai wekuroora uye ndine makore 45 nevana 2. Ndozvishandira muguta reHarare, andida ngaandibate pa0774 899 996.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 34 nemwana 1 ndodawo murume ane makore 35 kusvika 45. Ngaave anoda zvekuroora ari pamushonga. Andifarira nhare yangu 0714 121 222.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35, ndinogara kuChitungwiza. Ndinotsvagawo mukadzi anoda zveimba ane makore 24-29, ane mwana 1 kana asina. Ngaandibate pa0783 324 902.
Makadii vechirongwa? Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvaga mukadzi wekuroora anozvishandira kana kuti ane zvinhu zvake. Ngaave ari pamushonga, anofona pa0774 293 805.
Ndiri mukadzi ane makore 25 nemwana 1, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume ane makore 29 kusvika 36. Ngaave ari pamushonga, anoshanda uye akavimbika. Anondida ngandibate pa0782 593 975 asi kwete varume vevanhu, ndapota hangu.
VeTishamwaridzane makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 43, ndinotsvagawo murume ane makore 48 kusvika 55. Ndiri HIV negative, ndoita basa remawoko. Zvakawanda totaura pa0777 385 595.
Ndiri murume ane makore 35, ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 20 – 25 anoda zvemba kwete zvekutamba. Chero ane vana 2 ndinomuda. Ndinoita basa rekutyaira mota, nhare yangu 0777 711 692.
Ndiri murume ane makore 36 nevana 2, ndinoita zvekurima pafarm pangu. Ndinodawo mudzimai ane makore 30 zvichidzika akazvipira kuongororwa ropa. Ndinobatika pa0716 106 421.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 20 – 24. Vanoda ngavandibate pa0773 933 879.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 35, ndinodawo murume anondiroora ari pamushonga. Ndine vana vatatu, ari pachokwadi ndibate pa0785 561 034.
Makadini tete? Ini ndiri mudzimai ane makore 34 nevana 3, ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichienda mberi. Ngaave asina mukadzi, nhamba yangu 0716 284 265. Ndatenda.
Ndiri murume ane makore 39 nemwana 1, handina chirwere uye ndakasununguka kunotorwa ropa. Ndoda mukadzi akavimbika asina hutsvina, anotya Mwari asina chirwere uye asina murume. Nhamba yangu inoti 0716 181 404.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 27, munaku uye ndine mwana 1. Ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi, anoda zvemba ngaandibate pa0777 010 157.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 25. Anenge andifarira anondibata pa0737 727 286.
Makadini zvenyu veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 36, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi ane makore ari pasi peangu. Nhamba dzangu 0773 332 581.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 36 nevana vatatu, ndinoda mukadzi wekuvaka musha naye ane mwana kana asina. Ndinoda ane makore 32 zvichidzika. Andifariwo ngaandibate pa0775 244 879.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 29 ndotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 39 zvichidzika, kunyanya anoshanda muHurumende uye ari HIV positive. Nhare yangu 0713 844 782.
Makadii vaverengi veKwayedza? Ndiri murume ane makore 29 okuberekwa, ndiri kutsvagawo shamwarikadzi yekufambidzana nayo kusvika taroorana ane makore 20-26. Nhare yangu 0774 532 082.
Makadii? Ndanzwa nekunyorera ndisingabuditswi, ndiri mudzimai munaku mutete mushava ane makore 25 nemwana 1. Ndinodawo murume ane makore 30 – 35 anoenda kubasa. Vandifarira ndibatei pa0772 637 970.
Makadini veKwayedza? Ndanzwa nekunyora shambadzo yangu. Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana wekufambidzana naye akanaka pachiso chero ane mwana. Nhare yangu 0776 242 073.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, ndinotsvaga mudzimai anoda zvemba. Zvizhinji tozotaura, anoda ngaandibate pa0772 928 944.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvagawo musikana ngaave nemakore 24 zvichidzika kusvika 20. Ngaave smart, anoda ngaandibate pa0776 947 662.
Makadii veTishamwaridzane? Ndinotsvagawo mukadzi wekuwana, ndine makore 19 ekuberekwa. Kana paine andifarira ngaandibate pa0776 581 063.
Makadini? Ndinotsvagawo mudzimai wekufambidzana naye ane makore 35 zvichidzika ari pamushonga. Ndine makore 33, andida ngaafone pa0785 202 997.
Ndiri murume ane makore 55, ndiri pamushonga uye ndinotsvaga mukadzi wekugara naye akavimbika anoda zvemba ane makore 35. Ngaave ane vana 2, ane rudo. Ndobatika panhamba dzinoti 0718 931 419.
Ndiri murume ane makore 37, handina mwana uye ndotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana 1 ane makore 18-22. Izvozvi ndiri kuSouth Africa, nhare yangu +27 783 759 889.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 38, ndinodawo murume wekugara naye kweupenyu hwese asi vanotamba kwete. Ndine vana 3, andida ndibate pa0774 778 153. Ndiri muHarare.
Ndiri mukomana ane makore 35 ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 24 kusvika 34. Asina kumboroorwa kana kuita mwana. Andifarira ngaandibate pa0733 848 706.
Ndinodawo mudzimai ane makore 27 zvichidzika, ngaaave mushava anofarira mvura uye ane tsika dzakanaka asiri pachirongwa. Ndibatei pa0783 867 087.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 23 ari pachokwadi. Andifarira anondibata pa0737 966 467.
Ndiri murume ane makore 43 nevana 2 ndotsvaga mukadzi ari HIV negative ane makore 36 zvichidzika anoda zverudo. Anoisa sms pa0776 800 515.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 32 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi. Ndanzwa nematsotsi, ndoda ari pamushonga. Nhare yangu 0737 541 184.
Makadini veKwayedza? Ndotenda nebasa renyu, ndiri murume ane makore 30 ekuberekwa nevana 2. Ndotsvakawo mudzimai anoshanda ane rudo neni. Ini ndinoshanda, ngaave ane makore 19 – 25 asiri pamushonga. Andifarira nhare yangu 0715 153 042.
Ndiri murume ane makore 28, ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 25. Andifarira ngatitaure panhamba dzinoti 0716 782 516.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri kutsvaga mukadzi ane makore 24 zvichidzika. Ngaave ari pamushonga uye achigara kwaRusape. Ini ndine makore 26 okuberekwa. Andifarira totaura nesms panhamba idzi 0774 263 682. Tariro ichipo!
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 19 kusvika 24 asiri pamushonga. Nhare yangu 0771 091 604.
Ndiri mai vane makore 40 ndotsvaga murume ane makore 45 zvichikwira ari pamushonga seni. Zvakawanda tozotaura, nhare yangu 0779 418 417.
Ndoda kukuzivisai kuti vanhu ngavasafone panhamba idzi 0771 006 770, ndakazowana wandaitsvaga. Ndinotenda nebasa ramakaita.